Kuzvamburwa neMboro neBhinya after i caught hubby Cheating Part 1 – Makuhwa.co.zw
Kuzvamburwa neMboro neBhinya after i caught hubby Cheating Part 1
Almost 4 months stuck in DRC Congo waiting for loads, nothing and kubasa kwavo hakubvumirwe kufamba empty for long distances so he had to wait that long
I am a married wife mother of two, ndirikuma early 30s of age, not going kubasa ndoswera hangu ndakachengeta vana, so I have been waiting for my hubby to come back from DRC
Finally one day he called me kuti anga aamunzira, munongoziyawo semaladies yes we can wait that long even more without sex.the moment he told me that he was coming, asikana zemo rakabva ratanga kusimuka, rakatanga kuerera zemo nemuviri wese.Ndakati regai ndisanonatsogeza zvangu baba pavanozosvika vanowana ndairi very very fresh
Vakazosvika daddy ndokuvatambira nemufaro mukuru apa even beche rakatanga kutovhita vhita ndichivaona, vakasvika paye zvikanzi rega ndiite quick shower, plus time dzanga dzatoenda it was around kuma past 7 to 8 manheru.
While he was bathing, pakabva papinda chat pa APP pake, and message yacho yakangosvikira pa screen yakadzi, “Thanx daddy nekupfura muchindiona, ndainge ndakusuwai, iko ku DRC kwenyu kwamunogara nguva yakareba musina kutiona, isu tenge takuvara nezemo kuno, asi maita basa, nekuti masviriro amandiita nhasi haa even week rese ndisingadi kuiona rinokwana, hope to see you soon maakudzoka, mufarise maiguru kumba, Love you Mai Muna.”
Nditarise mufone ndione number dzakasevhewa kunzi Barber Jose, ndakabva ndaziya kuti something was VERY up, ndakapotsa ndaita heart attack, pfungwa dzakawandisa dzakauya mumusoro wangu, ndakashaya kuti ndoita sei nekuti ndainge ndisina kumbofungira murume wangu kuti angaita hunhu hwakadai, I trusted him zvekuti dhu, asi musi uyu hasha dzakandikurira. Achipedza kugeza akasvika ndokutora mafuta ekuzora apa shasha irikutoridza zvayo tumuridzo ichifara ruff, ini manje muromo watoo mukanwa WAS!!!
He quickly noticed kuti something was wrong ndokubvunza zvikanzi ko indaa babby?
I then said “don’t indaa babby me” ndakabva ndabudisa fone yake ndikati Electrician vatumira chat pa App, bva ndamuratidza.
Akaverenga message, instead yekuonawo kuti akanya he started shouting manje, hee wabatirei fone yangu ini ndasiya ndaidzima hee what what, Ndakangosimuka ndikati saka shuwa waakutoda kutodeffender hure rako iroro instead of apologising, wakajaidzwa mwana wehure, musatanyoko. Ndakabva ndaigarirwa mbama yematsenganzungu nekuita dzungu ipapo, luck vana vainge vakaenda havo kumusha kwambuya vavo kuholiday saka we were just two. Maparents angu anogara kuKuwadzana 4, ini nemurume toroja ku Corobrow, ndakangofunga mai vangu ipapo, ndokubva ndabuda nekunanga kwamai vangu, “ehe enda kana uchifunga kuti ndichakuteera funga kaviri”, he said that to me, apa I was only wearing a nighty chete panty ndainge ndabvisa zvese nebraa panga pachigeza baba paye.
I wasn’t thinking straight that time ndabva ndangouda ndakadaro. If u know kuCorobro, uchangoti fambei so pane zibani re short cut kusvika kukwadzana 4, ndorandakatora iroro, apa kwanga kwatoo kuma past eight to nine but nehasha I did not even think about that.
I was now half way muzibani muya, ndobva ndanzwa kuti shwaka shwaka shwaka matsimba emhu achibuda muzvimahuswa, chandakakwanisa kuona kakupenyerera so, izvo ibanga raipenya, ndakaedza kuda kumhanya nekuridza mhere asi it was too late, ndakabatwa, ndobva ndanzi nyarara kuti zii ndakaiswa banga muhuro ndichirinzwa kuti anytime rinondicheka. Zvikanzi ukangoita noise chete ndokuuraya, ndipe zvaunazvo tione, ndipe fone kana cash KASIRA!!!
Ndakataura nekavoice kekutya ndikati handina kana chunhu please musandiuraya ndirikutaura chokwadzi kana muchida ndisechei henyu. Shasha yakatsvangadzira ndokutanga kundisecha, he soon realized kuti I was only wearing ka nighty and no pants no cash and no cell phone it was just inini. Hana yangu yaiita seichatsemuka nekurova, at first akatanga achiita zveganyabvu In a way yekundisecha zveshuwa, asi nechekwekupedzesera ndakazonzwa mupaka wachinja, ndainge zvino ndaakupuruzirwa, ndakambotanga ndiri tense ndisingadi kuterera zvaiitika, but manje ndakazotanga kumbunyikidzwa matako zvine zi grip, and ndainyatsonzwa kuti ndakabatwa nerume pano, ndakadhonzerwa mudhuze so,rume ndokumira kumashure kwangu, apa ndainzwa munhuhwi hwemunhu, type iya yekuti hapana kana deodorant asi munhu anezimweyawo rake rehumunhu.
Related Topics:Kuzvamburwa neMboro
Zimboro Mubhazi iii i couldn’t resist i had to taste – Part 1